Ntuziaka na ụdị nke ikpo okwu e-commerce maka ụlọ ahịa gị n'ịntanetị | ECommerce ozi ọma
Ọ na-ahụkarị ịnwe ahụmịhe ahịa dị iche karịa ndị ọrụ ibe anyị ndị ọzọ, ụfọdụ ndị enyi na-eche na ire ahịa mpaghara bụ nke kachasị mma mgbe ahịa na-eto eto kama jupụta.
Ezie na ndị ọzọ na-ekwu na ọ ka mma ịhọrọ a ahịa na-ama mepụtara na nanị itinye ego na ọhụrụ echiche ma ọ bụ mmejuputa iwu-iji melite ahịa na nloghachi na itinye ego. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji na-amụ the ụdị nke nyiwe e-commerce nke ahịa ugbu a.
1 Kedu ihe na - eweta ego kachasị ugbu a?
2 Uru nke nyiwe E-commerce
2.1 Uru nke nyiwe E-commerce
2.2 Uzo ojoo nke nyiwe E-commerce
3 Offọdụ n'ime usoro ntanetị kacha mma e-commerce taa
3.2 Magento Open Isi Iyi
3.4 Igolọ ahịa Jigo
Kedu ihe na - eweta ego kachasị ugbu a?
N'ezie, ọ bụghị nri, azụmahịa nri aghọwo akụkụ nke egosiputara dịka aha ma ọ bụ dịka saịtị ndị njem nleta na nleta oge ụfọdụ, n'ụzọ dị otu a ọ na-eme na mpaghara ndị ọzọ ire ere ma obu oru, ha nọ na ebere nke nnukwu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mba na-agbasapụ na-enweghị nsogbu ma ọ bụ mbọ ọ bụla.
Ịkwado, bụ okwu ahụ ha rere anyị n'oge niile mgbe anyị gbalịrị ịme akara anyị ma ọ bụ azụmaahịa anyị nke ọma na akụ na ụba na nke a ma ama, ịkwado onwe anyị bụ otu ihe ahụ dị ka ịme onwe anyị aha ndị mmadụ ji agbanwere ahụmịhe mara mma ma ọ bụ ọbụlagodi nke kpatara ha ịkpọasị ma ọ bụ afọ ojuju.
La isi ihe dị n'itinye ya Na ụdị azụmaahịa ọ bụla, ọ bụ etu anyị si ahụ ndị ahịa anyị na etu ha si ahụ anyị.
Ndị azụmahịa dị 90% dabere na nkwukọrịta anya ma ọ bụ nke anụ ahụ, na nsogbu dijitalụ ahịa Gịnị ka ọ pụtara nye anyị? Omume dị a haveaa ka anyị kwesịrị inwe? Olee otu anyi choro ka e si hu anyi? Maka azịza nye ajụjụ ndị a niile siri ike ịza ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịmalite ụlọ ọrụ ahịa dijitalụ na-enweghị usoro ikpo okwu e-commerce.
Uru nke nyiwe E-commerce
na E-azụmahịa nyiwe, bụ akụkụ nke azụmaahịa dị n'ịntanetị nke anyị, dịka azụmaahịa na-eto eto ma ọ bụ na-emepe emepe, nwere ike ịmalite ịmata nzaghachi nke ọha na eze n'ụzọ dị mfe, dị mfe, dị irè yana yana nkwukọrịta na-aga n'ihu n'etiti akụkụ ọnụọgụ na akụ na ụba na oke ikike nke ogo anyị nwere ike iji kwalite ahịa nke ngwaahịa anyị.
na mmelite ire ahịa Ọ bụghị otu ihe dị ka ire ọtụtụ ma ọ bụ inye nnukwu ihe, inwe ikike ịnye ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ahịa nwere ike ime ka anyị daba na aghụghọ na anyị na-enwetakwu ego, mgbe anyị gafere uru nke mmepụta, nke ahụ bụ gịnị kpatara a E-azụmahịa n'elu ikpo okwu, nwere ike inyere gị aka na ọnụ ọgụgụ ọnụọgụ na eserese arụmọrụ akụ na ụba, yabụ ị ga-ama n'ezie ma ọ bụrụ na ahịa gị na-eweta uru ma ọ bụ bụrụ nnukwu ego na oge ụfọdụ.
Ajụjụ ndị na-ebilite maka onye, ​​dị ka gị, nwere mmasị ịmara uru nke nyiwe E-commerce, dị nnọọ mfe ma kwekọọ na ndị na-esonụ:
Akụ na ụba. N'ime ihe okwu a gụnyere, ajụjụ dị mkpa ga-abụ, anyị na akụnụba akụnụba ga - emetụta anyị kpọmkwem? Ànyị ga-ego onye ga-arụ ha?
Ihe omuma ihe omuma. Ọ bụrụ na ịmaghị usoro ọ bụla, anyị ga-ewe onye ndụmọdụ ma ọ bụ onye a zụrụ azụ ịrụ ọrụ a.
Routezọ nke oru anyị. Ọ bụrụ na katalọgụ anyị kpuchie ọtụtụ oghere ma ọ bụ ọdịnaya nke ọtụtụ ọdịnaya, olee otu anyị ga - esi mee ka ọ kwụsie ike ka e wee nwee ike nyocha ya n'enweghị nsogbu na n'ụzọ dị mfe? Ọ nwere ike ịdị mkpa ịme ọtụtụ ụlọ ahịa ma guzobe ndị ga-abụ ndị mmekọ anyị, ọ bụrụ na enwere ma ọ bụ ma ọ bụrụ na anyị ga-ere na anyị.
Ọrụ ndị dị mkpa. Storelọ ahịa dị n'ịntanetị na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi ọdịdị ya pụtara ìhè, mana yana ike ịza ajụjụ anyị gbasara ọnụahịa, nnweta na ogo ngwaahịa, kedụ ihe dị mma ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị mma, mana na enweghị ọrụ? Na azụmahịa e-commerce, a na-atụ aro ka ị mata banyere ọganihu iji mụbaa ọrụ na-enweghị ihe ndị a na-eme ka ejupụta na nchekwa nke ụlọ ahịa ahụ, ọ dị anyị mkpa izute ezigbo mkpa ka anyị wee ghara ịdaba na azụmaahịa na-enweghị isi nke anaghị achọpụta n'etiti mpi.
Hà ụlọ ahịa anyị. Ọ ga-adị mkpa ịmepụta ego nke ngwaahịa anyị nwere, ọnụahịa ha, nkwalite, isi nke ire ere, ụgwọ mbupu, ha niile dabere na ọnụọgụ ndị ahịa anyị nwere olileanya ịnwe, anyị enweghị ike ịnwe nnukwu ngwaahịa a n'ihi na ọ gaghị ewepụta karia mmefu, anyi aghaghi iburu n'uche onu ogugu na isi ihe nke mmeputa nke anyi gha agha.
Nkwado. Ndị na-ahụ maka ịntanetị na-etinyekarị ikpe ngwa ngwa, nke mere na ọ dịghị otu ụbọchị gafere mgbe ihe merenụ wee kwado nkwado dị mkpa, ma ọ bụ site na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị ma ọ bụ site na mkpesa ndị ahịa ụfọdụ, iji nye ha Sochie ị ga-enyerịrị ntị na ihe ha bụ n'ezie kwuo na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị anaghị ada.
Ebe ọ bụ na anyị ejirila ebumnuche anyị nke ọma dịka azụmaahịa ga - enwe ọnụnọ na azụmaahịa azụmaahịa n'oge na - adịghị anya, ị ga-agarịrị ihe ndị a. Pna-echekwa ikpo okwu e-commerce Ọ na-ekwe nkwa nnukwu elele, ọ bụghị naanị gị kamakwa ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ azụmaahịa gị.
Ebe ntanetị, nke anaghị ewepụta ego ọ bụla maka ịbanye dị ka onye ọrụ, mana maka ụfọdụ arụmọrụ.
Wide ọtụtụ ndebiri, Beingbụ otu n'ime ebe nlegharị anya maka ọtụtụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ndebiri ndị ahụ gụnyere ụdị dị mfe, nke ụdị, ma a na-ahazi ya ma ọ bụ ọbụlagodi maka ekwentị mkpanaaka, chee na ọtụtụ narị mmadụ na-eche ụlọ ahịa gị n'ịntanetị site na ekwentị ha nwere nkwekọ ziri ezi iji rụọ ọrụ kacha mma nke ụlọ ahịa ahụ. ma mee ka ọ dịrị ha mfe ịzụta ngwaahịa n’ime naanị nkeji.
Mbido kensinammuoNa mgbakwunye na ịdị mfe, ha na-agụnyekarị ngalaba nchịkwa na ọdịdị kwesịrị ekwesị iji kwado nchọgharị na ịzụ ahịa n'ịntanetị.
A na-ezubere ha maka nnukwu katalọgụ. Ọ bụrụ na inweela katalọgụ nke ngwaahịa na ngwaahịa ma ọ bụ n'okpuru mmepe, usoro ntanetị e-commerce bụ ihe ịchọrọ, ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe iji mee ka mmadụ niile mara maka ọdịnaya gị, ngwaahịa, ahịrị, ọkwa na onyinye pụrụ iche.
Ha enweghị nchebe. Ihe a pụrụ ịdabere na ya nke ka mma, ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu nke ndị na-azụ ahịa, ma ọ bụrụ na ha ahụghị interface na arụmọrụ mepụtara n'ụzọ bara uru, nke ọkachamara ma ọ bụ naanị na e gosipụtara ya dị ka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nwere ọtụtụ ọrụ ndị na-adịghị agbanwe agbanwe ụzọ ka ha zụta, enweghị ntụkwasị obi Ọ bụ ihe # 1 na-akpata ahịa furu efu, ọ bụ ya mere ị ga-eji chọọ ikpo okwu e-commerce nke dị mma maka gị na azụmaahịa ahịa gị, na-enweghị ndị ahịa na-efu na itinye ego na ezigbo mma.
Uzo ojoo nke nyiwe E-commerce
Algunas de las ọghọm nke nyiwe e-commerce Ha bụ ihe ndị a na agbanyeghị na-emegiderịta onwe ha, enwere ụdị ọghọm ndị a n'ezie nke anyị kwesịrị iburu n'uche mgbe anyị nwetara usoro azụmahịa nke e-commerce, ka anyị wee ghara ịdaba n'otu mmejọ ahụ dị ka ọtụtụ ụlọ ahịa ndị ọzọ dị n'ịntanetị:
Gwọ nwere ike ịdị elu. Ọbụna mgbe ịntanetị dị ka ebe nweere onwe ya, omume nke ire ngwaahịa na nhọrọ na nchekwa nwere ike ime ka anyị nwee nnukwu ego karịa ihe anyị tụlere, na mgbakwunye na eziokwu nke ogo nyiwe na-adabara mgbe ụfọdụ ego ole a na-etinye na ya, bụ ihe na-akpali ndị mmepe ka ha mezie ya oge niile.
Ihe arụmọrụ. Ha nwere ike ọ gaghị ezuru ma ọbụlagodi n'ụzọ, anyị achọghị ọtụtụ atụmatụ ma ọ bụ na anyị chọrọ karịa, ọtụtụ anaghị enwe atụmatụ zuru oke dịka echiche.
Nke ezigbo ohere. Oghere ndị dị n'ígwé ojii dị ka ụlọ, dị oke ọnụ ma dị oke ọnụ karị, enwere ego mgbazinye oge na anyị enweghị ike ịkwụ ụgwọ nke ukwuu maka oghere anyị nwere ike ịnọdụ ma ọ bụ nke nwere ike ọ gaghị ezuru anyị.
Ihe isi ike nke ijikwa katalọgụ buru ibu. Ọ bụ ezie na nke a bụ otu n'ime uru ọtụtụ nyiwe e-commerce nwere, ọtụtụ ndị ọzọ na-eleghara ikike ịhazi katalọgụ ahịa buru ibu anya, yabụ ị ga-ahọrọ ngwaahịa ndị ahụ kachasị ere ma ghara ịnye usoro niile ị nwere. nwere, nke a nwere ike ịdị mma ma ọ bụrụ na ị na-atụ anya itinye obere ego n'ihi na nyiwe e-commerce dị ọnụ ala bụ ndị na-akwado obere katalọgụ ngwaahịa, ebe ọ bụrụ na ichere ịtọlite ​​katalọgụ buru ibu, enwere ike iwe gị na ike nke ndị dị ala - mkpuchi nyiwe ma ọ bụ n'efu.
Enyemaka ọzọ. Packfọdụ ngwungwu iji gosipụta omume na sistemụ ụlọ ahịa ahụ, nwere ike ịbụ ihe siri ike iji. Ọ dị mma karịa ịnwale ya, ị ga-enweta enyemaka ọkachamara ma ọ bụ onye ndụmọdụ ka ejiri ụdị nchịkọta nhazi maka ụlọ ahịa gị n'ịntanetị, yabụ ọ bụrụ na ịnweghị onye ndụmọdụ dị ọnụ ala ma ọ bụ chọọ ịchekwa ego, anyị na-akwado ịhọrọ ihe kensinammuo ikpo okwu na mfe melite.
Mkpa maka a e-azụmahịa n'elu ikpo okwuỌ na-abịa kpọmkwem na ahụmịhe anyị nwere ike ịnwe na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ọ dịghị onye chọrọ igbu oge, ọ dịghị onye chọrọ ụgwọ dị iche na kaadị akwụmụgwọ ha.
Ndị na-azụ ahịa anaghị atụkwasị obi na ịntanetị iji tinye paswọọdụ ha na ụlọ ahịa ọ bụla ha hụrụ n'ịntanetị, yabụ asọmpi a dị oke egwu ma, n'ụzọ, ọhịa.
Kwado onwe anyị dị ka azụmahịa bara uru na-egosi ịme mkpebi akụ na ụba na itinye ego dị mkpa, usoro ntanetị e-commerce bụ ngwaọrụ ahụ ga - enyere gị aka ime ka ahịa gị kwụsie ike ma jiri nke nta nke nta melite.
Offọdụ n'ime usoro ntanetị kacha mma e-commerce taa
Nke a bụ otu n'ime nyiwe ntanetị nke na-ahụ maka ịmepụta ma melite ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ugbu a, ụfọdụ akụkụ dị mma nke X-Cart bụ:
Nkwado teknụzụ nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke asụsụ dị.
Ọ na-anọgide na-emeghe isi, free.
Fọdụ n'ime akụkụ ọjọọ nke X-Cart bụ:
Nweta ndị ahịa abụghị nhọrọ nweere onwe ha, a ga-akwụ ụgwọ ọzọ.
A na-ahụta na atụmatụ atụmatụ "adịchaghị" dị obere, na ọ ruru $ 495, ọ bụghị asọmpi asọmpi dị ugbu a.
Magento Open Isi Iyi
Ọ na-positioned dị ka otu n'ime free e-azụmahịa nyiwe, ndị kasị ewu ewu n'ụwa, ndị a bụ akụkụ dị mma nke Magento Open Source:
Ọ bụ ikpo okwu e-commerce na-akwụghị ụgwọ kpamkpam, isi mmalite, nwere ike ime ka ụdị ahụ ka mma site na nhọrọ akwụ ụgwọ.
Ndepụta ọrụ ya buru ibu ma zuru oke, ịkwesighi ile anya ọzọ.
Ikpo okwu a na - enye gị ohere ịmepụta profaịlụ na asụsụ ndị edoziri dịka mpaghara nke onye ahịa dị.
Fọdụ ọghọm dị na ikpo okwu e-commerce nke Magento Open Source bụ:
The interface na-ezu zuru ezu na niile ọrụ, Otú ọ dị, ọ na-aghọ ntugheriukwu ma ọ bụghị oru oma, ikekwe ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị ambivalent ihe maka a n'elu ikpo okwu.
Enwere ego itinye ego na ịnwe ndị mmepe ma ọ bụ ndị ọrụ teknụzụ iji rụọ ọrụ mmezi na ịhazi ọrụ, ikpo okwu n'onwe ya dị mgbagwoju anya maka onye na-enweghị nzụlite na mmepe nke dijitalụ.
Nke a online trading ikpo okwu awade ohere jikwaa gị online ụlọ ahịa fọrọ nke nta ka nwa play, ka anyị hụ ya uru:
Ọchịchị dị mfe ma dị mfe nke ngwaahịa gị, ị na-echekwa itinye ego nke nkwado teknụzụ ma ọ bụ enyemaka ọzọ.
Ihe nlegharị anya, ịtụnanya na nke mara mma maka ịmepụta saịtị ntanetị n'ịntanetị.
Ihe kachasị mkpa maka ikpo okwu n'ịntanetị ụbọchị ndị a kwesịrị ịnọ, PrestaShop Ọ mere? Ka anyị lelee ala ala nke usoro ntanetị a:
N'agbanyeghị oke ịdị mfe ya, o nwere ọrụ ole na ole, ikekwe ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere asọmpi ya, ọ nweghị ọrụ asọmpi na akụkụ ọnụọgụ.
Mgbakwunye zoro ezo dị ka ihe mere ị ga-eji na-emefuwanye ihe, na-abụ otu ndọtị nke ndị nwere ọnụ ahịa dị elu na-enye.
Igolọ ahịa Jigo
N'agbanyeghị ntụnyere na ndị ọzọ online trading nyiwe, Jigo Shop na-anọgide a ikpo okwu dị iche, ka anyị hụ uru ya:
Edebere ya dịka usoro ntanetị kachasị n'ịntanetị iji mee ihe, karịsịa maka ndị ọrụ nwere obere ma ọ bụ enweghị ahụmịhe, ezigbo maka azụmaahịa na-eto eto na asọmpi e-commerce siri ike.
Nhọrọ dịgasị iche iche nke isiokwu maka onye ahịa na ihe niile maka otu ọnụego (n'efu).
Igolọ ahịa Jigo, nwere uru na-atụ egwu, nke na-eme ka nsogbu nke ikpo okwu a na-enyekwu ihe a na-enyo enyo:
Ànyị ga-ahapụ ọrụ ndị ahịa n'azụ? O di nwute na nke a abughi nhọrọ, mana enweghi oke maka oru ndi ahia bu ihe o putara.
Njirimara izizi ezughị, ha na-ekwughachi uche maka ụdị onye na-enweghị uche nke onye nrụpụta na-achọ naanị elementrị na-enweghị mmasi maka mmelite ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ na-akwụghị ụgwọ.
N'agbanyeghị na ọ bụghị metụtara otu n'ime ihe ukwu nke nyiwe azụmaahịa n'ịntanetị, WP eCommerce, ọ dị n'azụ iji tụnyere ya ma nọrọ n'azụ kacha mma, agbanyeghị, ọ ka bụ nhọrọ dị oke mma dị ka oghere azụmaahịa na-emepe emepe n'ịntanetị, ka anyị hụ uru ọ na-enye:
Imirikiti atụmatụ kachasị mma nke ikpo okwu n'ịntanetị nwere ha, ọbụlagodi ndị kachasị asọmpi.
Ọ na-adị n'etiti usoro ntanetị kachasị n'ịntanetị maka ndị na-ege ntị na-ege ntị, nke pụtara na ọ dịghị achọ enyemaka aka ọrụ ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ mmezi mgbagwoju anya.
Ihe doro anya dị na ntanetị a nwere ike ịtụ ụjọ, ka anyị lelee nke ahụ:
O nweghi mgbakwunye-na ndozi.
Enweghi ezuru WordPress gburugburu maka WP eCommerce.
Were ọtụtụ ndị dịka kacha mma na-emeghe iyi online trading ikpo okwu. WooCommerce bụ onye asọmpi nke onye ọ bụla chọrọ ka e jiri ya tụnyere ya, edobere ya dịka otu n'ime nhọrọ kachasị mma, ka anyị mara ụfọdụ uru ya:
Ihe nkwado nwere ike ịbụ budata n’efu, nke a bụ ihe na-ekwe nkwa ntinye nke ọtụtụ ndị ahịa ebe ọ bụ na ọtụtụ ụlọ ahịa na-achọ naanị ka ọrụ a rụọ ọrụ nke ọma.
Ọ na ejikọ n'ụzọ dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma na ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ niile dị ugbu a.
Site na usoro ntanetị ndị a n'ịntanetị, ọ ga-abụrịrị na ọ doro anya na ọtụtụ uru nwere ike ịnwe ambivalence ịbụ uru maka ụfọdụ, mana nnukwu ọghọm maka ndị ọzọ, ịchọpụta ezigbo azụmaahịa n'ịntanetị maka anyị bụ ọrụ anyị ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Nkuzi na akuru » E-azụmahịa nyiwe
Kedu otu esi ahọrọ Bochum maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
Etu esi ebubata ngwaahịa na PrestaShop